XNXX: boky 3 hahalala ny zava-drehetra momba ny firaisana - TELES RELAY
Avy amin'ny fomba 1001 raha te hanana fahafinaretana ho an'ny tsiambaratelon'ny firaisana ara-nofo, eto dia misy boky 3 hahalala haingana ny zava-drehetra fa ilaina ny mahafantatra ny firaisana ara-nofo mba hiaina azy tanteraka.
Kaonty Instagram tamin'ny voalohany, Jouissance Club izao dia boky fampianarana fanabeazana momba ny firaisana ara-panabeazana mampiroborobo ny fahafaham-po azon'ny rehetra, vehivavy, lehilahy, tsy binoafidy, hetero, homo, bi ary izany rehetra izany. Jüne Plã, mpanoratra ity boky ity, feno sary feno erotika sy torohevitra azo ampiharina, dia nanoro hevitra ny hametrahana azy ho mifantoka amin'ny fifantohana ny fomba 1001 mba hanana fahafinaretana samy hafa, tsy mahay sary, jobilant ary fikarakarana. Mampiasà sary marika maro dia manolotra sarintanin'ireo zona maro izay manome fahafinaretana sy zava-tsarin'ny fihetsiky ny hetsika orgasmic.
Sex araka ny filazan'i Maïa
Maïa Mazaurette dia manam-pahaizana momba ny firaisana ara-pananahana eran'izao tontolo izao, ilay mpanoratra an-trano izay manilikilika sy manala ny firaisana ara-nofo amin'ny hatsikana sy ny fahatsorana. Ary tamin'ity taona ity, namoaka boky iray misy lisitra dimampolo izy, mba hanolorany "Ny famakafakana ny fanao momba ny firaisana ara-nofo, manala ny fahamelohana taloha. Amin'ny alàlan'ny tantaran-dry zareo, i Maïa miatrika lohahevitra toy ny ny fahitana momba ny vatana, ny fomba fanao, ny idealy, ny fahazarana ara-kolotsaina, rehefa mametraka fanontaniana ilaina, toy ny: "Tokony hiezaka ve isika ny hanao firaisana?" " na: "Mbola mila manao firaisana ve isika? ". Boky tena mahaliana sy mampahafantatra ary manome fahafahana.
Ny firaisana ara-nofo amiko
Na 15 na 70 na lehilahy dia mbola manana fanontaniana ny lehilahy ny masin'izy ireo. Maninona no atao tahaka an'izany, ahoana ny fiasan'asa, normal ve aho? Mba hamaliana ireo fanontaniana ireo dia i Marc Galiano, andrologist, ary Rica Etienne, mpanao gazety no nanoratra io boky io. Izy ireo dia manazava indrindra ny fiasan'ny zakar sy ny olana nipoitra avy amin'izany. Ny tanjona: ny kabary maimaimpoana ary valio indray mandeha sy ho an'ny fanontaniana rehetra izay matetika ananan'ny lehilahy mangingina amin'ny tenany mangingina. Ao amin'ny fandaharana: ny misterin'ny fananganana sy ny ejaculation, na ireo tsiambaratelo mba hanatsarana ny fahafinaretana ara-nofo.